ADO Finfinnee gale. [OBN 15 09 2010] Jilli garee marii Adda Demokraasummaa Oromoo(ADO) har’a ganama Finfinnee gale. – Kichuu
HomeAfaan OromooTVADO Finfinnee gale. [OBN 15 09 2010] Jilli garee marii Adda Demokraasummaa Oromoo(ADO) har’a ganama Finfinnee gale.
Har’a ganama Buufata Xiyyaaraa Idil Addunyaa Boolee yammuu ga’an gorsaan dhimma nageenyaa muummee ministiraa obbo Abbaa Duulaa Gammadaa, ministirri Waajjira Dhimmoota Koominikeeshinii Federaalaa obbo Ahimad Shiidee fi qondaaltonni mootummaa simannaa taasisaniifiru.
Jilichaan chaartara mootummaa cee’umsaa keessaa kan ba’an hoggantoonni ABO duraanii fi Adda Demokraasummaa Oromoo Har’a ganama Finfinnee seenaniiru. Jila marii addichaatin obbo Leencoo Lataa, obbo Leencoo Baatii, Dooktar Diimaa Nagawoo, Dooktar Bayaan Asoobaa, Dooktar Hasan Huseenfaan keessatti argamu.
Dura taa’aan ADO obbo Leencoo Lataa yaada laataniin, haalli biyya keessaa qabsoo nagayaa gaggeessuuf mijataa ta’uu isaatin garabiyyaa kan deebine jedhaniiru. Addichi kophaa yookin paartilee kaan waliin qindoomee hojjechuuf ni murteessas jedhaniiru.Dhaabbileen siyaasaa qabsoo hidhannoo filatanii ba’anis, yaada jijjiirratanii gara biyyaa deebi’uun qabsoo nagayaatti akka makaman obbo Leencoon dhaamaniiru.
Dhugaan afaan qaban funyaaniin xiixxe dubbatti warra utuu lubbuun jiruu jiraa dhabamsiifame, har’a lubbuun jiruufi hin jiranii uummatni Oromoo walii wallaalee halkanii guyyaa ciniinsifataa jiruuf furmaanni Siyaasaa haa kennamu
#FreeNadhiiGamadaa goota Ija barbadaa!!
Breaking Chinaksan-Abdi Illen Lola qindaawa ganama kana araddoota keenyarratti baneen hamma ammat ilmaan Oromoo 2 woreegamani Tokko ammo haalan miidhameera .